Trujillo sy ny Eglizy Katolika | Diary 2015
NANAO ahoana ny fifandraisan’i Trujillo sy ny Eglizy Katolika? Hoy ny olona iray mpandalina politika: “Nifanohana ny Eglizy sy ny fitondrana dominikanina, nandritra an’ilay fotoana lava be nitondran’i Trujillo (1930-1961). I Trujillo nankasitraka ny Eglizy, moa ny Eglizy nanohana an’ilay fitondrana jadona.”
Nankany Roma i Trujillo tamin’ny 1954, ary nanao fifanekena tamin’ny Papa. Hoy i Germán Ornes, ilay tanana ankavanan’i Trujillo: ‘Nanampy be an’i Trujillo ny Eglizy, satria tena nanohana azy. Ny mpitondra fivavahana no anisan’ny tena nampirisika ny olona ho tia an’ilay fitondrana, ka loha laharana tamin’izany ny Arseveka Ricardo Pittini sy Octavio Beras.’
Hoy ihany i Ornes: ‘Nanoratra kely ho an’i Trujillo foana ny Papa isaky ny nisy fahafahana. Nitondra firarian-tsoa ho an’i Trujillo, ohatra, ny Kardinaly Francis Spellman, solontenan’ ny Papa, tao amin’ilay Zaikabe Momba ny Finoana Katolika. Natao teto Ciudad Trujillo io zaikabe io, tamin’ny 1956, sady i Trujillo mihitsy no nanohana azy io. Rehefa tonga teto koa ny Kardinaly Spellman, avy any New York, dia nitsena azy tamin’ny fomba nanetriketrika i Trujillo. Ny ampitson’iny, dia nisongadina teo amin’ny pejy voalohan’ny gazety eran’ny Repoblika Dominikanina ny sarin’izy ireo nifamihina be.’
Hoy ny gazety Fotoana, tamin’ny 1960: “Mbola mifanaraka tsara i Trujillo sy ny Eglizy hatramin’izao. Efa 83 taona sady tsy mahita intsony izao ny Arseveka Ricardo Pittini, Arsevekan’ireo tanin’i Amerika. Mbola afaka nanao sonia taratasy iray ho an’ny Gazetin’i New York anefa izy, efa-taona lasa izay. Nidera an’i Trujillo izy tao amin’ilay taratasy, ary nilaza fa ‘be mpitia sy nomen’ny olona voninahitra io “mpitondra jadona” io.’”
Lasa namadika palitao anefa ny Eglizy Katolika, rehefa avy nanohana an’ilay fitondrana jadona sy tsy mifaditrovana, nandritra ny 30 taona teo ho eo. Niova mantsy ny toe-draharaha politika tamin’izany. Hoy ilay mpandalina politika: “Tena nanohana an’i Trujillo ny Eglizy. Voatery niova famindra anefa izy io rehefa nihamaro ny mpanohitra an’i Trujillo, ary niezaka nanangana fitondrana entim-bahoaka ny olona.”
Voatery nangata-pamelana tamin’ny vahoaka ny Eglizy tamin’ny 2011. Izao, ohatra, no voalazan’ny taratasy iray ho an’ny Katolika rehetra, tao amin’ny gazety Dominikanina Ankehitriny: ‘Mibaboka tamin’ny tsy nety nataonay izahay. Mifona koa izahay satria tsy mba nitana ny finoantsika, sady tsy nanao tsara ny adidy sy ny andraikitray. Mangata-pamelana amin’ny Dominikanina rehetra izahay, ary manantena fa hamindra fo aminay ianareo sady hahatakatra ny fihetseham-ponay.’